प्राइम बैङ्कको भदौ १२ बाट ३ः१ हकप्रद शेयर निष्काशन
साउन २७, काठमाडौं । प्राईम कमर्सियल बैङ्क लिमिटेडले ३ बराबर १ (३ः१) अनुपातमा भदौ १२ गते देखि हकप्रद शेयर निष्काशन गर्दैछ । बैङ्कको शेयरधनीका लागि प्रति शेयर एक सय अंकित दरको १ करोड २३ लाख ५० हजार ८ सय ७४ कित्ता हकप्रद शेयर निष्काशन गर्न लागेको हो ।
बैङ्कको हकप्रद शेयर निष्काशन असोज १६ गते बन्द हुनेछ । बैङ्कको साउन गते सम्म शेयर किन्ने वा शेयर स्वामित्व रहने शेयरधनी हुनेले आवेदन दिन सक्नेछन् । शेयर खरीदका लागि सिभिल क्यापिटल र प्राईम बैङ्कका सम्पूण शाखाहरुबाट दरखास्त फारम उपलब्ध हुने बैङ्कले प्रकाशित गरेको सुचना मार्फत जानकारी गराएको छ ।
हकप्रद शेयर निष्काशन पछि बैङ्कको चुक्ता पूँजी ४ अर्ब ९४ करोड पुग्नेछ । बैङ्कले आव ०७३÷७४ मा चुक्ता पूँजी रू. ८ अर्ब पुग्ने प्रक्षपण गरिएको छ । बैङ्कले चुक्ता पूँजी वृद्धिको लागि प्राईम विराटलक्ष्मी विकास बैङ्क र कन्ट्री डेभलपमेण्ट बैङ्क सँग एक्विजीसन गर्ने सम्बन्धी समझदारी–पत्रमा हस्ताक्षेर गरिसकेको छ ।
बैङ्कले चालू आवमा प्रति शेयर आम्दानी रू. १८ दशमलव ६७ र खुद मुनाफा रू. २ अर्ब ३५ करोड पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ । प्राईम बैङ्कको बुधवार नेप्सेमा प्रति शेयर रू. ६ सय ७१ मा कारोबार भएको थियो ।